Malaayiin Tahriibayaal cusub oo ay ku jiraan Somali oo la filayo inay gaaraan Europe.
Warbixin ay soo saareen Sirdoonka Milliteri ee dalka Austria oo ah Hay’ad hoos tagta Ciiddanka dalkaasi ayaa lagu sheegay inay saddexda sanno ee soo socoto la filan karo inay 15 million oo Qaxooti Cusub oo ka imaanayo Afrika soo galaan Europe.
Warbixinta ayaa saadaalisay inay qulqulkaasi u sababa noqon doonto Shaqo la’aanta ka jirta Qaaradda Afrika, taasi oo horseedi karta in malaayiin Tahriibayal dhaqaale-doon ah u soo socdaalaan Qaaradda Europe, iyagoo shaqo-doon ah laga bilaabo sannadkan ilaa 2020-ka.
Sirdoonka Milliteri ee dalka Austria waxay ku taliyeen in la taageero Shaqo-abuur, wax-soo-saarka iyo Waxbarashadda Afrika si looga hortego Qulqulkaasi .
Warbixinta waxay kaloo ku baaqday Dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan Tahriibayaasha in loo maalgeliyo, si ay ilaalo uga qabtaan Xuduudahooda iyo in la yareeyo Qulqulka xawliga ee Tahriibayaasha.
Daraasadda ay Ciiddanka dalka Austria soo bandhigaan ayaa timid, kadib, Cilmi-baaris socotay muddadii u dhexeysay sannadihii 2013-kii ilaa 2016-kii, iyadoo ay in ka badan 500,000 oo Qaxooti Afrikaan ah u soo tahriibeen dalalka Midowga Europe.
Dhinaca kale, Daraasadda ayaa lagu ogaaday Tiradda Tahriibayaasha Afrikaanka ee ku sugan dalalka Midowga Europe, waxayna kala yihiin:
Ku-dhawaad 100,000 oo Qaxooti Eritrean ah.
80,000 oo Qaxooti Nigerian ah.
Ku-dhawaad 60,000 oo Somali ah,
40,000 oo u dhalatay Gambia,
Mali iyo Nigeria min 30,000 oo Qaxooti ah,
Sudan, Kongada Dimuqraadiga, Gini iyo Senigal oo ay ka yimaadeen in ka badan 20,000 oo qof.